Otu esi achọpụta nọmba nzuzo | Gam akporosis
Otu n’ime ajụjụ ọtụtụ ndị ọrụ na-ajụ onwe ha kwa ụbọchị bụ esi achọpụta nọmba nzuzo. Mgbe ndị mmadụ malitere iji ekwentị eme ihe, otu ọrụ nke dọọrọ mmasị ndị mmadụ bụ inwe ike ịhụ nọmba ekwentị na-akpọ anyị oge niile.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmata ngwa ngwa ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ anyị, enyi, enyi nwanyị ... Site na ịrị elu nke ekwentị mkpanaaka, ekwentị mkpanaaka bidoro na-ewu ewu. oku ahia, oku ha na-akpọkarị na etiti ehihie, mgbe ha na-ekwu na ha maara na anyị ga-aza mgbe anyị nọ n'ụlọ, ma ọ bụ iri nri ma ọ bụ izu ike.
1 Nọmba zoro ezo vs nọmba nkeonwe
2 Otu esi achọpụta nọmba nzuzo na-enweghị ngwa
3 Otu esi achọta nọmba onwe gị mgbe ị kwụsịrị
4 Otu esi achọta nọmba nzuzo na ekwentị ekwentị
5 Etu esi akpọ nọmba nọmba onwe
6 Otu esi achọpụta ọnụọgụ amaghị
6.2 Oku ID Ngwa
6.2.1 Isi okwu
6.2.3 Kpọọ ngwa
Nọmba zoro ezo vs nọmba nkeonwe
Ọ bụ ezie na enwe na silk, enwe na-anọ. Nọmba nzuzo na nọmba zoro ezo n’ikpeazụ ha bụ otu, Onweghị ihe dị iche na etiti ha karịa aha ha natara na ekwentị anyị mgbe ha natara ya.
Ihe mere na ị nwere ike ịnweta ụdị oku a bụ abụọ:
Onye na-ekwu okwu a chọrọ izo nọmba ekwentị ya (ihe kpatara ya ga-enwe)
Akara ekwentị ahụ na ihe ngbanwe nke na-anaghị ekwe ka ịnweta oku.
N'oge na-adịbeghị anya, ọ dịkarịa ala na Spain, ọ siri ike zute ụdị oku a. Companieslọ ọrụ ndị na-ere ahịa bụ ndị jiri ọrụ a rụọ ọrụ karịa, mana n'ịhụ na mmadụ ole na ole na-atụtụ ekwentị ahụ, ha kpebiri ịkwụsị ịzobe ya site na ngbanwe ahụ.
Mgbe ị na-akpọ oku site na ndị na-agbanwe agbanwe, anyị nwere ike ịghaghachi oku ahụ mana n'ọtụtụ ọnọdụ, anyị agaghị enwe ike ịkpọtụrụ nọmba ekwentị ọ bụrụ na ịgbanye ọkụ adịghị enweta oku. N'oge ndị ọzọ, a na-egosipụta ngosipụta akpaka ga-agwa anyị ụlọ ọrụ akpọrọ anyị.
Otu esi achọpụta nọmba nzuzo na-enweghị ngwa
Chọpụta nọmba nkeonwe enweghị ngwa ọ bụla ọ gaghị ekwe omume. Ma kwa, n'ihi ọdịdị nke nọmba ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịmara nke bụ nọmba nzuzo nke na-akpọ anyị ma ọ bụ hapụla oku na-efu na ekwentị anyị site na ngwa ndị ọzọ.
Nanị ụzọ ịmara onye nọmba nzuzo nke oku bụ bụ ịza, dị mfe dịka ọ na-akpasu iwe, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ na ejighị ihe n'aka gbara gburugburu nọmba nzuzo dị omimi akpọtụrụla anyị. Enweghị ụzọ ọzọ.
Otu esi achọta nọmba onwe gị mgbe ị kwụsịrị
Ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na-eche otu esi achọta nọmba nzuzo nke ị kpọrọ mgbe anyi enweghi ohere iji bulie nko ahu ma obu anyi juru ime ya n'ihi na obu nọmba zoro ezo.
Tupu ọbịbịa nke ekwentị, ịmara onye kpọrọ anyị site na nọmba nzuzo ma ọ bụ nke zoro ezo nwere ike dee koodu * 69 na ekwentị mgbe ị natara oku ma azaghị ya. Uzo a adighi na smartphones, yabụ belụsọ ma i jiri a agba ekwentị dị ka mobiles maka ndi okenye, ị gaghị enwe ike ịmata ozi ahụ.
Otu esi achọta nọmba nzuzo na ekwentị ekwentị
Chọta onye kpọrọ anyị na nọmba nkeonwe na ekwentị ozi agaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na n'ime ekwentị mkpanaaka, ebe anyị nwere ike iji koodu USSD, ọ gaghị ekwe omume ịmata njirimara nke nọmba nkeonwe, na ekwentị ekwentị, ebe koodu USSD nke netwọọdụ GSM adịghị, ọ nweghị usoro iji nweta ya.
Etu esi akpọ nọmba nọmba onwe
Iji nwee ike ịkpọ oku na-ezo nọmba ekwentị yana nọmba zoro ezo ma ọ bụ nọmba nkeonwe gosipụtara na ihuenyo onye nnata anyị (ederede egosipụtara dabere na onye ọrụ), anyị nwere ụdị abụọ.
Site na nhazi nhọrọ nke ama anyị ma ọ bụ, ụzọ kachasị atụ iji mee ya oge ụfọdụ bụ site na iji koodu UUSD # 31 # soro nọmba ekwentị na anyị chọrọ ịkpọ ma ghara ịhapụ ohere ọ bụla.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ zoo nọmba ekwentị gị oge ọ bụla ị kpọrọ (anaghị atụ aro ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a za oku gị), ịnwere ike ịme ya site na ntọala ngwa anyị ji akpọ oku.
N'ihe banyere ngwa Google, ọ dị iche na ndị ọzọ nke njedebe, anyị na-eme usoro ndị a:
Anyị na-emeghe ekwentị na pịa na atọ vetikal ihe iji nweta Ntọala.
N'ime Ntọala, pịa Oku.
Na Oku Ntọala, pịa ID nke oku wee họrọ Zoo nọmba.
Na ngwaọrụ ndị ọzọ, a na-ahụ nhọrọ a na ngwa Ntọala Ekwentị - Ntọala ndị ọzọ - Ntọala ndị ọzọ - Gosi onye na-akpọ m. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta ya, anyị nwere ike ịnweta igbe nchọta nke ntọala ntọala anyị ma dee «Oku oku ID» (na-enweghị nkwuputa) ịchọta nhọrọ ozugbo.
Otu esi achọpụta ọnụọgụ amaghị
Ọ bụ ezie na ịmara onye na-akpọ anyị na nọmba nzuzo ma ọ bụ nọmba zoro ezo agaghị ekwe omume na smartphone, ọ bụghị mara onye nwere akara igwe nke a kporo anyi ma anyi edobeghi ya.
Iji chọpụta ọnụọgụ amaghi ama anyị nwere nhọrọ abụọ:
Iji ngwa ID nke onye na-akpọ oku.
Site na WhatsApp anyị nwere ike nweta echiche site na foto onye ọrụ ahụ, onye nwere ike ịkpọ anyị. Ọ bụrụ na edeghị nọmba ekwentị na WhatsApp, ọ bụ, na 99% nke ikpe nke ụlọ ọrụ, bụrụ ahịa, ụlọ akụ, otu gọọmentị ...
Oku ID Ngwa
Ngwa niile dị na Playlọ Ahịa Play nke na-enye anyị ohere mata akara ekwentị, dị maka nbudata dị ka kpamkpam enwerela onwe ya na anyị nwere ike iji ha na-enweghị nsogbu ọ bụla gbasara arụmọrụ ha.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ị nweta ọtụtụ uru na ya, site na mmelite nchekwa data akpaka, ohere ịdekọ oku ... anyị kwesịrị iji ya ndenye aha kwa ọnwa na ha na-enye anyị. Ọ bụ ezie na m na-ekwughachi, iji mara nọmba ekwentị a na-amaghị ama, mbipute nnwere onwe zuru ezu.
EziCaller ọ bụghị nanị na-enye anyị ohere ịmata onye akara ekwentị ahụ na-akpọ anyị kwekọrọ, kamakwa na-enye anyị ohere ịchọ nọmba ekwentị, na-egbochi nọmba ndị ahụ ozugbo ka ọ bụrụ adịghị kpọtụrụ anyị ọzọ site na oku ma ọ bụ SMS.
Truecaller: Oku spam na -emegide
Hiya na-eme ka anyị mata onye nwere nọmba ekwentị ndị kpọrọ anyị ma zitere anyị ozi ederede. Ọ na-enye anyị ohere ịmepụta ndepụta ojii na ọnụọgụ ekwentị nke anyị achọghị ka ha gbanye ọzọ na ekwentị anyị. Ọ na-enye anyị ohere ịchọ nọmba ekwentị na nchekwa data na mgbakwunye na jikota na okike nke nchekwa data.
CallAll bụ otu n'ime ngwa ole na ole, na mgbakwunye na ikwe ka anyị gbochie oku na ọnụ ọgụgụ ekwentị dị na nchekwa data ya, na-enyekwa anyị ohere ndekọ oku na ngwaọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi achọpụta nọmba nzuzo
Ebudatara m realcaller mana ọ gaghị ekwe ka m banye
Zaghachi Yoniel Pérez